Jowhar.com - Somali news Leader - News: Tartan loogu magacdaray dabaal-dega todobaadka Xuriyada oo Afgooye lagu soo gaba-gabeeyay (Sawirro)
December 13 2013 14:18:51
Tartan loogu magacdaray dabaal-dega todobaadka Xuriyada oo Afgooye lagu soo gaba-gabeeyay (Sawirro)
Tartankan lagu maamuusayay todobaadka Xuriyada islamarkaasina isdhexgal loogu abuurayay Xaafadaha Degmada Afgooye ayaa lagu soo gaba gabeeyay afgooye.
Todobaad yadii lasoo dhaafay ayaa waxa uu tartan xiiso badan ku dhexmarayay Degmada Afyooge Kooxo laga soo kala xulay Xaafadaha Degmada Afgooye iyadoo tartankan ay Soo qaban gaabiyeen Dhalinyarada Ururka SYAO.
Gaba gabadii Tartanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay Mas�uuliyiinta Degmada Afgooye, Gudiga Isboortiga, Garsoorayaasha Degmada, Mas�uuliyiin katirsan SYAO, waxaa sidoo kale u soo daawasho tagay Bulshada qeybaheeda kaladuwan.
Waxaa Finalka u soo baxay kooxaha Gantaalaha VS Xulka Siigaale, kuwaasi oo ay ciyaartoyda u ciyaareysay ay soo bandhigeen Ciyaar aad ay ula dheceen dhamaan daawadayaashii garoonka ku sugnaa.
Laba kooxood oo aad u adkaa ayaa sababtay in la ismariwaayo iyadoo waqtiga lagu dhameystay weerar iyo weerar celin la isku mariwaayay, gudiga garsoorka ayaa ku kala saaray gool ku laadyo labada koox kaasi oo ay guusha ku raacday kooxda Xulka Siigaale.
Tartanka Dabaaldega todobaadka Xuriyada iyo isdhexgalka Bulshada Degmada Afgooye ayaa Xiritaankiisa waxaa ka hadlay gudoomiyaha Xiriirka k/cagta Degmada Afgooye Idiris C/qadir 'Buuri' waxa uuna SYAO uga mahadceliyay qaban gaabada iyo bixinta agabka isboortiga ay degmada ugu tala gashay, isagoo ka dalbaday in SYAO ay xoojiso tartamada noocaan oo kale ah.
Sidoo kale waxaa goobta hadalo dar daaran u badnaa ka jeediyay gudoomiyaha Olombikada Gobolka Sh/ Dhexe, kabtankii ugu horeeyay xulka Qaranka Maxamed Khalaf aadan Shongole waxa uuna kula dardaarmay dhalinyaradii garoonka ku sugnaa in ay kor u qaadaan ciyaaraha soomaaliya oo ay noqdaan kuwo soomaaliya qarannimo u horseedo.
"Waxaan sidoo kale ku amaanayaa Doorka ay SYAO ka ciyaareyso isboortiga Soomaaliya, maadaama ay inta badan gobolada dalka ku qabaneyso tartamada nuucaan oo kale ah todobaadyo ka hor ayey afgooye ku soo gaba gabeeyeen tartan nuucaan oo kale ah" Ayuu hadalkiisa raaciyay Mr Shongole.
Ku simaha Gudoomiyaha SYAO Cismaan Axmed Rooble oo isna gaba gabada ka hadlaya ayaa dhamaan kula dardaarmay ka shaqeynta Nabada, isagoo xusay in SYAO ay xoojin doonto shaqada ay u hayaan Dhalinyarada Soomaaliyeed.
Gudoomiye kuxigeenka Maamulka Degmada ee dhinaca Amniga Mahdi Axmed Xasan oo soo xirayay Tartanka ayaa dhamaan dhalintii goota isugu timid ku bogaadiyay Nabada iyo ishdexgalka, Waxa uuna SYAO ku amaanay doorka ay Amniga iyo wacyigalinta ka gaadaneyso.
Intii uu tartanka socday ayaa waxaa u soo daawasho tagi jiray dhalinyaro aad u badnaa kuwaas oo ka kala imaanayay xaafadaha Degmada Afgooye iyo deegaanada u dhaw dhaw.
Ugu dambeyntii waxa ay mas'uuliyiintii Maamulka Degmada iyo Mas'uuliyiintii SYAO ay goobta Abaal marino isugu jiray Koobab, Bilado qalab isboorti iyo Hadiyado kale ku gudoonsiiyeen kooxihii iyo shaqsiyaadkii kaalinta ka qaatay intii uu tartanka socday.
master on July 01 2013
0 Comments · 3933 Reads
jowhar.com3,193,960 unique visits